विश्वले एकसाथ कोरोना भाइरसविरुद्धका धेरै खोप पाउँदै Canada Nepal
नेपालमा पायो ‘कोभिसिल्ड’ खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति
काठमाडौ । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)विरुद्ध को खोप ‘कोभिसिल्ड’ले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ । सरकारले कानुन संशोधन गरेसँगै औषधि व्यवस्था विभागले ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको औषधि विभागको बैठकले कोभिडसिल्डलाई अनुमति दिएको जानकारी दिइएको छ । विभागनकाअनुसार कोभिसिल्ड हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि.ले दर्ता गरेर ल्याउन लागेको हो ।
यसअघि बुधबार विभागले कोरोनाविरूद्ध खोपको आयातका लागि उत्पादक वा आयातकर्तालाई दर्ता अनुमति पत्रका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
तर, विभागकाअनुसार हालसम्म तीन वटा आयातकर्ताहरुले आवदेन दिएका थिए । यसमध्ये कागजात नपुगेका दुईवटालाई पूरा गर्न भन्दै कोभिसिल्डलाई भने अनुमति दिइएको विभागको भनाइ छ ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १६:२७:२३ बजे : प्रकाशित
नेपालले कोरोनाविरुद्ध खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिने बाटो खाेल्याे
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने बाटो खालेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले भोलि शनिबारबाट अभियानकै रुपमा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउन लागेका बेला नेपाल सरकारले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने बाटो खोलेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन मिल्ने गरि कानुन संशोधन गरेको जानकारी दिएको हो ।
‘यसअघि आपत्तकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था थिएन । अहिले कानुन संशोधन गरेका छौँ’, मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार हालसम्म कुनै पनि खोपले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएका छैनन् । तर, अब बाटो भने खुलेको उनको भनाइ छ ।
आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति माग्ने निवेदन दिन सकिने जानकारी दिएका उनले हालसम्म कसैलाई अनुमति नदिएको बताए ।
‘कानुन संशोधन भइसकेकाले अब खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति माग्न निवेदन दिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर दिएको निवेदनमाथि आवश्यक परामर्शपछि अनुमति दिइनेछ ।’
नेपालसहित छिमेकी देशलाई २ करोड डोज कोरोना खोप दिने भारतको योजना
भारतले नेपालसहित ६ छिमेकी मुलुकलाई दुई करोड कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप दिने योजना बनाएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेको हो ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १६:११:५१ बजे : प्रकाशित
नेपालमा थप २७० जनामा कोरोना संक्रमण, ५ जनाले गुमाए ज्यान
काठमाडौँ। काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप २७० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका २७० सहित कूल संक्रमितको संख्या २ लाख ६६ हजार ८ सय १६ पुगेको छ ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ३९० जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ६० हजार ५ सय ६७ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४ हजार ३ सय १ रहेको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जना कोरोनाभाइरस संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १,९४८ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १५:४७:५७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई दुई करोड कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप दिने योजना बनाएको छ । विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो कोरोना प्रभावित मुलुक भारतले नेपालसहित छिमेकी देशलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बसिरहेका बेला भारतले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई दुई करोड कोरोना खोप उपलब्ध गराउने योजना भएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इण्डियाले प्रकाशन गरेको छ ।
भारतीय सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इण्डियाले प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार भारतले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेचेलेस र मौरिससलाई दुई करोड डोज कोरोनाविरुद्धको खोप दिने योजना अघि सारेको टाइम्स अफ इन्डियाले बताएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्ने भारतको योजनाअनुसार भारतीय कम्पनीहरुले सेरम इन्स्टिच्युट र भारत बायोटेकबाट खोप खरिद गरी नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई कोरोना खोप निर्यात गर्न लागेको हो ।
हाल छलफको चरणमा रहेको सो भारतीय योजनाअनुसार केही सहयोगमा रुपमा निःशुल्क कोरोना खोप प्रदान गरिने टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ ।
यही जनवरी १६ बाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु गर्न लागेको भारतले अबको दुई साताभित्र कोरोना खोप निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
भारतीय सरकारी अधिकारीले नेपालसहित ६ छिमेकी मुलुकलाई दुई करोड कोरोना खोपको डोज उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेका बेला भारत बायोटेक र सेरम इन्स्टिच्युटले भने हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १४:३५:३१ बजे : प्रकाशित
पिनास हुँदा के खाने के नखाने ? यस्ता छन् घरेलु उपचार
काठमाडौं । जाडो मौसममा पिनास बढी हुने गर्छ । रुघा लाग्नुलाई सामान्य मानेर उपचार नगर्दा पिनास हुने सम्भावना बढी हुन्छ । पिनासलाई चिकित्सकीय भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ ।
साइनोसाइटिस भनेको नाक वरिपरिका पिनास ग्रन्थीहरू (साइनास) सुनिएर रातोतातो भई दुख्नु र काम गर्न छाड्नु हो । साइनसले टाउकोलाई हलुका बनाउन, स्वरलाई स्पष्ट बनाउन, सहजतापूर्वक श्वास लिनेजस्ता कार्य गर्दछ ।
के हो पिनास र किन हुन्छ ? लक्षण र बच्ने उपाय
टाउको र अनुहारका हाडहरूमा हुने हावा भरिएका खाली भागहरूमा पातलो झिल्लीको तह हुन्छ । जब कुनै व्यक्तिलाई रूघा तथा एलर्जी हुँदा साइनसमा सिँगान भरिने र सुन्निने सम्भावना बढी हुन्छ । साइनसको निकास माध्यम अवरुद्ध हुँदा सिँगान भित्र थुनिँदा ब्याक्टेरिया एवं भाइरस विकसित हुन्छ, जस कारण पिसान हुने गर्छ ।
साथै धूलो धूवाँ, नाकमा हुने संक्रमण, विभिन्न किसिमका नाकका एलर्जीहरू, नाकभित्रको हड्डी बाङ्गिनु, नाकभित्र मासु बढ्नु वा पलाउनु पनि पिनास हुनुका कारण हुन् । पिनास चार प्रकारका हुन्छन्, तीव्र पिनास, मध्यम पिनास, जीर्ण पिनास र आवर्तक तीव्र पिनास ।
के खान हुने ?
पिनासमात्रै होइन कुनै पनि रोग लागेको के खाने के खाने छुट्याउनु पर्र्ने हुन्छ । पिनास भएमा उसिनेको खाना मात्र खाँदा राम्रो हुन्छ । सिंगान बगिरहेमा अदुवा, तुलसी, बेसार हालेर उमालेको पानी पिउनु पर्छ । साथै मुगको दाल, गहतको रस, खजुर, किसमिस, स्याउ खान हुन्छ ।
यस्तै सुख्खा पिनास भए पानीमा थोरै कागतीको रस मिलाएर पनि पिउँदा दाभदायक हुन्छ । झोलिलो र पोषिलो खानेकुरा खानु पर्छ ।
यस्तै लसुन, प्याज, तोरी, ल्वाङ, मरिच, कडीपत्ता वेसा, ज्वानो, सौफ, अदुवा, हिङहरू खाने भने अमला र भुईंकटहरको सेवनले पनि पिनासको समस्या हटाउन मद्दत गर्दछ । तर पिनासको कारणले नाथ्री फुट्ने र रगत बग्ने अवस्था छ भने मसलाहरू प्रयोग गरिएको खानेकुरा नखाने ।
पिनास भएमा दही, दूध, माछा, मासु, अण्डा, पीरो, अमिलो अचार, चिल्लो, चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन । साथै मासको दाल, तामा, फर्सी, गोलभेंडा, पिंडालु, मुला, करेला, बकुल्ला, तोरीको साग पनि खानु हुँदैन । यदी नाकबाट रगत बगेको छ भने बढी तातो र मसालेदार खानेकुरा पनि खानु हुँदैन । तारे भुटेको, कोल्ड ड्रिङ्क, मैदा, केक, पिज्जा, बर्गर, माछा, मासु अण्डा चिज, पनीर, बटर, दुध र दुग्धजन्य पदार्थ पनि खानु हुँदैन ।
मौसमजन्य तथा मानिसको हेलचेक्राइँबाट हुने सामान्य रोगको उपचार घरमै पनि गर्न सकिन्छ । यदी पिनासमा भएमा अदुवा, धनियाँ, बेसार, पिप्पली भुटेर पिँधेर बनाएको धुलोलाई मसलाको रुपमा र सुप बनाएर खाँदा फाइदा हुन्छ । मरिच, सख्खरजस्दा शरीरलाई न्यानो गर्ने खानेकुरा खानु पर्छ । विशेषगरी चिसोबाट जोगिँदै मनतातो पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
यस्तै नुनपानीले दिनको दुई तीन पटक कुल्ला गर्ने र प्राणायाम गर्न सके अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । यस्तै जलनेती, सूत्रनेति, वाफ लिने, टाउकाको मालिस गर्ने र सुत्नुभन्दा पहिले २÷३ थोपासम्म मनतातो गाईको घिउ नाकमा हाल्नाले पिनास कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
यदी नाकभित्र मासु पलाएको, सुन्निएको हड्डी बाङ्िगएको वा नासिका मार्ग थुनिएको भए विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा उपचार गर्नुपर्छ ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १२:०९:०९ बजे : प्रकाशित
# घरेलु उपचार
निमोनिया, यसका प्रकार र बच्ने सरल उपाय
काठमाडौं । निमोनिया एक प्रकारको छातिको संक्रमण हो, जसले फोक्सोको बाँया वा दायाँ भाग वा कहिलेकाँही सम्पूर्ण फोक्सोलाई नै असर गर्न सक्छ । निमोनिया भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने गर्दछ, जसले फोक्सोमा रहेको एलभियोली अर्थात् हावा भरिने थैलीहरु सुन्निने र संक्रमणका कारण पानी र पिप जम्मा हुने गर्दछ । जसका कारण फोक्सोलाई रगतबाट अक्सिजन प्राप्त गर्न कठिनाई हुन्छ। जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा बाधा पुग्दछ।
ब्याक्टेरिया र भाइरसकाबाहेक अरू कारणले पनि निमोनिया हुन सक्दछ । कुनै अरू अर्को रोगको कारण अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूमा पनि न्युमोनिया देखिन सक्छ । अस्पताल क्षेत्रमा भएका जीवाणुका कारणले गर्दा हुने भएकोले यसलाई रोक्न त्यत्ति सजिलो छैन। निमोनिया भएका बिरामीहरू एक दुई दिनमै सिकिस्त हुन्छन्, गल्छन्, खोकी लागिरहने हुनाले थकित पनि हुन्छन्।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू जस्तै, मधुमेहका बिरामी, एचआइभी संक्रमितहरु, अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिहरू, क्यान्सरका बिरामी र स्टेरोइड औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी आदिमा न्युमोनिया चाँडै लाग्दछ। त्यस्तै धुममान र मदिरा अत्यधिक सेवनले पनि निमोनिया हुन सक्दछ।
सामान्यतया, निमोनिया जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ । तर, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु बढी जोखिममा हुने गर्दछन्। किनभने, यी उमेर समुहमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने गर्दछ।
निमोनिया पाँच प्रकारका
१.ब्याक्टेरियल निमोनिया : स्ट्रेप्टीकोकस निमोनिया कारण ब्याक्टेरियल निमोनिया हुने गर्दछ । यो प्रायः पोषणको कमि, बढ्दो उमेर वा कुनै पुरानो रोगकोका कारण ब्याक्टेरियाले ग्रस्त भएका शरीरमा हुने गर्दछ। ब्याक्टेरियल निमोनियाले सबै उमेर समूहलाई असर गर्न सक्छ।
२.भाइरल निमोनिया : यस प्रकारको निमोनिया इन्फ्लूएन्जा (फ्लू) सहित विभिन्न भाइरल संक्रमणका कारणले हुने गर्दछ । यदि कसैलाई भाइरल निमोनिया भएको छ भने यस्तो अवस्थामा ब्याक्टेरियल निमोनिया हुने अधिक सम्भावना हुने गर्दछ।
३.माइकोप्लाज्मा निमोनिया : यस निमोनियामा केहि फरक लक्षणहरु हुने गर्दछन् । यो माइकोप्लासम नामक जीवाणुका कारण हुने गर्दछ ।
४.एस्पिरेशन निमोनिया : यो निमोनिया अस्वस्थ खाना, तरल पदार्थ वा धुलोले गर्दा हुने गर्दछ। यस प्रकारको निमोनिया उपचार गर्न कहिलेकाहीं गाह्रो हुने गर्दछ।
५.फगल निमोनिया : फंगसका कारण हुने निमोनियालाई फंगल निमोनिया भनिन्छ।
निमोनिया कति सामान्य र के कारणले हुन्छ ?
निमोनिया सबै उमेर समूहलाई हुन सक्छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मधुमेह, क्यान्सर, एचआइभी संक्रमित, अंग प्रत्यारोपण, सीओपीडी, दम जस्ता दीर्घकालीन रोगबाट पीडितहरू यसको जोखिममा बढी हुने गर्दछन्। यद्यपि, यी जोखिमहरुलाई घरेलु, आयुर्वेदिक वा चिकित्सय पद्धतिबाट कम गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया: निमोनिया भाइरस, ब्याक्टेरिया, फंगस वा अन्य जीवाणुले हुने गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा निमोनिया निम्त्याउने जीव (ब्याक्टेरिया वा भाइरस) परीक्षण गर्दा पनि पत्ता लगाउन नसकिने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
निमोनियाका बिरामीहरुमा खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, शरीर कम्पन हुनु, सास फेर्न अफ्ठ्यारो हुनु, खोक्दा वा गहिरो सास फेर्दा छातिमा दुखाइ हुनु, टाउको दुख्नु, भोक नलाग्नु, शरीर गल्नु वा थकान महसुस गर्नु र वान्ता आउनु लगायतका सामान्य लक्षणहरु देखापर्न सक्छ। यदि यस्तै समस्या वा निमोनियासँग सम्बन्धित अन्य कुनै लक्षण देखापरे चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
चिकित्सकलाई कति बेला देखाउने ?
सामान्य निमोनियालाई घरेलु उपचारले पनि ठिक गर्न सकिन्छ। तर, बिरामीको गम्भीरतालाई हेरेर चिकित्सकको परामर्श लिनु महत्वपुर्ण हुन्छ। यदि काम ज्वरो आएमा, छाति दुखे वा सास फेर्न अफ्ठ्यारो भएमा, बिरामीको उमेर ५० वर्षभन्दा कम वा ६५ वर्ष भन्दा बढी भएमा, फोक्सोबाट रगत वा बाक्लो र पहेंलो कफका साथ खोकी आएमा, छिटो छिटो स्वासप्रस्वाश भएमा चिकित्सकलाई देखाउनु आवश्यक पर्दछ।
जोखिम कसरी बढ्छ ?
निमोनियाको जोखिम रुघा खोकी बिग्रिएमा, अधिक धुमपान र मध्यपान सेवन गरेमा, छाति वा श्वासप्रणालीमा संक्रमण भएमा, इन्फ्लूएन्जा वा फ्लुले गम्भीर असर पारेमा, ल्यारेनजाइटीज् भएमा, फोक्सो सम्बन्धी रोग भएमा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएमा, अन्य गम्भीर रोग जस्तै मुटु रोग, लिभर सिरोसिस, मधुमेह, दम, एचआइभी संक्रमित, क्यन्सारबाट पीडित र अन्य दिर्घकालीन रोग भएका मानिसहरुमा बढ्ने गर्दछ।
निमोनियालाई धेरै पद्धतिद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ। यसको गम्भीरतामा निर्भर गर्दछ। केहि अवस्थाहरूमा निमोनियालाई घरमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ। ब्याक्टेरियल निमोनियाका बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खाएर ठिक पार्न सकिन्छ। त्यसैगरी, यदि भाइरल निमोनिया हो भने एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन।
यस्तो अवस्थामा आराम गर्नु, पोषणयुक्त खानु, अत्याधिक झोलिलो र पोषिलो पदार्थ पिउनु र ज्वरो आएको खण्डमा ज्वरोलाई निको पार्ने औषधि खानु आवश्यक हुन्छ। तर, बिमारीको गाम्भीर्यतालाई मध्येनजर गर्दै चिकित्सकको परामर्श आवश्यक पर्छ। चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना हुने सुझाब पनि दिन सक्छन्।
कुनै पनि किसिमको निमोनिया ठिक हुन समय लाग्ने गर्दछ। यस्तो समयमा शारीरलाई भरपुर आराम चाहिन्छ, जसले गर्दा सामान्य दिनचर्यादेखि आफ्नो काम समेत हप्ता वा १५ दिनका लागि प्रभावित हुन सक्छ। निमोनियाबाट ठिक भए पनि अर्को १५ दिन वा १ महिनासम्म शरीर गलेको वा थकित भएको महसुस गर्न सकिन्छ।
बालबालिकामा खोप लगाउने, जसलाई सरकारले निःशुल्क उपलव्ध गराएको छ । यी खोपले विभिन्न रोगविरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गर्दछ । पोषण युक्त खाना खाने वा खुवाउने, चिसोबाट बच्ने, धुवाँ धुलोबाट बच्ने, व्यायाम वा योग गर्ने, पर्याप्त मात्रामा तरल पदार्थ पिउने, सरसफाई गर्ने लगायतका उपायहरु अपनाएमा निमोनियाबाट टाढा रहन सकिन्छ।
माघ १, २०७७ बिहिवार १५:३४:५७ बजे : प्रकाशित
# निमोनियाको जोखिम